भुइँया महाराजको पूजा, उम्लिरहेको दूधले नुहाएर पूजा ! | Janaki Post
Home प्रदेश २ भुइँया महाराजको पूजा, उम्लिरहेको दूधले नुहाएर पूजा !
जनकपुरधाम : दाउरा दनदनी बलिरहेको चुलामा दुइटा माटाका तौला बसाले। त्यसमा ३५ किलो दूध खन्याए। दूध उमाल्न तापमा कमी नहोस् भनेर दुई जना धुप र दाउरा लगातार अँगेनामा हाल्न लागिपरे।
भगतिया र किर्तनियाहरू भने दिनाभद्री (भुइँया महराज)को गीत गाउँदै नाचिरहेका थिए। मूल भगता (धामी) इनरजित सदा पूजाका सामान जुटाउन व्यस्त थिए। दूध उम्लिएर पोखिन थालेपछि दुई जना धामीले आगो ढोग्दै नांगो हात तौलामा हाले। डाडुले दूध चलाएझै हातले नै चलाए। नांगो हातले दूध चलाउने क्रम पूजाको अन्त्यसम्म चल्यो।
जनकपुरको पेठिया बजारका अर्जुन मेस्तर र उनको परिवारले शुक्रबार आयोजना गरेको भुइँया महाराजको पूजा अनौठो देखिन्थ्यो। बिहेको १२ वर्षसम्म निःसन्तान रहेका मेस्तरले भगता इनरजितसमक्ष सन्तान प्राप्तिका लागि भाकल गरिदिन बिन्ती गरेका रहेछन्। तब भगताले भनेका थिए, ‘सन्तान पाइस् भने भुइँया महाराजको पूजा गर्नुपर्छ।’ मेस्तरले भाकलपछि जुम्ल्याहा छोरा पाए। त्यही खुसीमा उनले शुक्रबार पूजा आयोजना गरेका हुन्।
Previous articleसप्तरीमा तीन जना चढेको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा बीचमा बसेकाको मृत्यु, दुई घाइते
Next articleमिर्चैयामा कुकर बम फेला